iMovie Atụmatụ & Aghụghọ I Kwesịrị Ịmara
iMovie aghọwo otu n'ime ndị ọzọ na-ewu ewu video edezi omume gburugburu ekele ya kpọmkwem, otutu nhọrọ na eziokwu na ọ na-abịa free na ọhụrụ ọ bụla Mac. Ọ bụrụ na ị na-iMovie ọrụ na onye na-achọ ụzọ isi na-eme ka ndị kasị nke a software, e nwere 20 aghụghọ i nwere ike iji mara.
1. Multi-aka Mmegharị
2. Nke abụọ Ngosipụta
4. Ndị mmadụ Finder
5. Green / Blue ihuenyo
6. Foto dị na Foto dị
11. Agba Dozie
12. Ndepụta Okwu
13. Mbụ oyiri
16. Audio mmetụta
17. Naa Onye kere
18. Voice-ihe karịrị
19. Ifriizi Frames
Ọ bụrụ na ị na-onwem na a MacBook ma ọ bụ a na desktọọpụ Mac na Apple si MagicPad, ị nwere ike ime ka ojiji nke multi-aka atụmatụ-gi edezi workflow notch.
Iji tinye a clip gị oru ngo, gaa na Omume nchọgharị na-eji a atọ mkpịsị aka swipe elu na gị na trackpad.
Bugharịa ihe cursor n'elu usoro mgbasa ozi na tuo mkpịsị aka gị na-emeghe mụbaa na tuo mkpịsị aka gị na-emechi kpum gị echiche nke mgbasa ozi.
Họrọ clip n'ime gị usoro iheomume, na-eji a atọ mkpịsị aka swipe ịkwaga ya aka nri ma ọ bụ n'aka ekpe.
Ọ bụrụ na ị nwere a abụọ ngosi jikọọ kọmputa gị, ị pụrụ ime ka iMovie onyenlereanya naanị-egosi na nke abụọ ngosi mụbaa gị wọkspeesi na iMovie window. Ka iMovie na-egosi video on a abụọ Ngosipụta:
1. Hụ Advanced Ngwaọrụ na-tụgharịa na iMovie mmasị.
2. Họrọ Ohere> "onyenlereanya na ndị ọzọ na Ngosipụta".
Ugbu a, i nwere ike ọ bụghị naanị mbubata foto site na PhotoBooth na iPhoto, kamakwa site gị Facebook foto gallery, ekele na emelitere iPhoto, nke na-eme iLife-erite uru site miri mwekota na Facebook. A bụ otú:
1. Open iPhoto na mmekọrịta usoro ihe omume gị na Facebook akaụntụ.
2. Họrọ foto gallery ị chọrọ. Mgbe ahụ photos ga-echekwara na gị iLife Media Nchọgharị, na-eme ha dị ka ndị ọzọ niile iLife omume gụnyere iMovie.
3. Mgbe ahụ, ị nwere ike na-amalite na-eke gị onwe gị iMovie ngosi mmịfe.
iMovie ka ọ dị mfe na-esochi nke ndị niile gị mmepụta. Ị nwere ike iji Ndị mmadụ Finder atụmatụ iji nyochaa niile na obere vidiyo na a oru ngo na indentify mkpachị na ndị mmadụ na ya. Iji mee nke a, dị nnọọ na-eso nzọụkwụ:
1. Gbaa mbọ hụ na "Gosi Advanced Ngwaọrụ" na-ticked na iMovie si mmasị.
2. Họrọ gị oru ngo na-aga "File"> "Tụlee Video"> "Ndị mmadụ".
3. Ozugbo iMovie ka okokụre achọpụta, a-acha odo odo akara ga-egosi-egosi na Obere vidiyo ebe ndị mmadụ na-egosi.
Ọ bụrụ na ị gbaa a video na otu acha ndabere (mgbe green ọ bụ anụnụ anụnụ), iMovie-enye gị ohere ime ka agba uzo. Ị nwere ike dochie ndabere ọ bụla ọzọ na video clip, graphic ma ọ bụ ka oyiyi dị ka amasị gị. Na ọrụ a na-akpọ Green / Blue ihuenyo. Ebe a bụ a zuru ezu Nduzi na otú iji iMovie Green / Blue ihuenyo Mmetụta >>
Ọ bụrụ na ị chọrọ abụọ ma ọ bụ karịa mkpachị egwu n'out oge na otu ihuenyo, iMovie pụrụ inyere gị aka na nke ahụ. Ọ na-enye gị zuru nhọrọ iji foto na foto ma ọ bụ akụkụ site n'akụkụ mmetụta. Eso nke a nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu ịmụta otú iji ndise ke ndise ke iMovie.
iMovie nwere Sports Editor, nke nwere a pụrụ iche talent maka agbakwunye ọkpụkpọ aha na ọnụ ọgụgụ, ọkpụkpọ foto na otu logos. Ọ rite ozi a site na Sports Team Editor. Ugbu a ị pụrụ ịgbaso ndu ike gị egwuregwu isi na clicks.
iMovie na-enyekwa map ekwekọghị nke ị nwere ike ebe gị na fim. Ọ na-agụnye animated ụwa map, animated ewepụghị map, na static ewepụghị map. N'ime atọ edemede bụ anọ na ụdị nke map: Old World, watercolor, Educational, na Blue mabul. Nke a ndu na-agwa gị otú ịmepụta otu animated map na iMovie.
iMovie nwere animatics n'ihi na ị na ike ike nke onwe unu oru ngo, wee gbanwee ha maka footage ị gbaa mgbe e mesịrị. Iji tinye animatics, ị nwere ike:
1. Gaa "Ohere"> "Maps, nzụlite na Animatics" na gbadaa na chọta dị iche iche animatics.
2. Dọrọ-n-dobe onye mkpa ka ị na usoro iheomume nke. Mgbe ahụ, ị ​​ga-a dịanyā clip na ike mgbe e mesịrị-anọchi na a n'ezie clip.
3. Ọ bụrụ na ọhụrụ gị clip dị njikere, ịdọrọ ya n'elu animatic. Hapụ gị òké bọtịnụ na pịa Dochie, na ọrụ na-eme.
Ọ bụrụ na gị vidio ndị na-ejighị n'aka na oke shaky na-ekiri n'ihi igwefoto kwara a bit mgbe ị nọ ndekọ, iMovie nwere ike inyere idozi ya. Ọ nyochara ọ bụla otu etiti na video clip na ewepu na emee ka anya doo ozugbo ọ na-achọpụta na a igwefoto ngagharị bụ a bit si mgbe Ndekọ. Pịa ebe a iji mụtakwuo ihe ọmụma banyere video stabilization na iMovie.
Mgbe Ndekọ videos, mgbe ụfọdụ, igwefoto nwere ike na-aghọtahie ihie ma ọ bụ agba itule, ma ọ bụ na gburugburu ebe obibi na-ọkụ ewebata a na agba tint. iMovie pụrụ inyere gị aka gbazie gị footage iji nweta ezi na agba n'okpuru dị iche iche ọkụ ọnọdụ na ibe na-adịghị ike na agba. Soro a ndu ịmụta otú iji iMovie agba mgbazi ọrụ.
Chọrọ ka ịgbakwunye ndepụta okwu ka ndị ọzọ mara chọrọ gị chọrọ igosipụta na gị video? Nke ahụ bụ mfe! iMovie abịa na ọtụtụ sobtaitel ekwekọghị n'ihi na ị na tinye ọkachamara na-achọ ndepụta okwu gị videos. Ebe a bụ na ndu ka akụziri unu otú tinye ma dezie ndepụta okwu na iMovie.
Mgbe edezi vidiyo na iMovie, i nwere ike eji oge dị ukwuu na-eke a ọnụ ọgụgụ nke aha kaadị, mgbe ahụ, edezi ya ka dakọtara ogologo na font ịke nke gị aga na otu. N'ezie, ihe niile ị chọrọ ime bụ iji aha oyiri atụmatụ iMovie. Dị họrọ a clip ma họrọ "Clip"> "oyiri ikpeazụ Ngidi", dezie ederede na-aga.
iMovie-enyere gị aka tinye timestamp ọmụma gị video. Iji mee nke a, dị nnọọ eso mfe nduzi n'okpuru.
1. Pịa Aha Button na ala ọkara nke ihuenyo. Họrọ Ụbọchị / Oge aha na ịdọrọ ya n'elu a clip na Project n'ọbá akwụkwọ. Nke a ga-ịgbakwunye timestamp ọmụma.
2. Ọ bụrụ na oge na ụbọchị ọmụma adabaghị, họrọ clip na Omume nchọgharị (adịghị na usoro iheomume). Mgbe ahụ na-aga "File"> "Gbanwee Clip Ụbọchị na Time". A igbe ga-emeghe na nke ị nwere ike dezie timestamp ọmụma.
Agbakwụnye ikwu n'ụzọ n'etiti mkpachị nwere ike inyere ire ụtọ ma ọ bụ ngwakọta mgbanwe site na otu idaha ọzọ. Họrọ si pụtara ikwu n'ụzọ na iMovie na ịtọ oge na-amasị gị. Ebe a bụ a zuru ezu Nduzi na otú tinye ma dezie ikwu n'ụzọ na iMovie.
iMovie bụghị nanị-enyere gị aka tinye pụtara visual mmetụta gị video, kamakwa jụụ audio mmetụta. Ugbu a, i nwere ike tinye mmetụta dị ka Echo, Katidral, Muffled, na-agbanwe pitch nke ọdịyo elu ma ọ bụ ala. A bụ zuru ezu ndu >>
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na edezi music, na-agbalị nnọọ iMovie Beater Nnwale si. Ọ na-ekwe gị ịtọ ihe na ọdịyo track na dobe na video na he nke dakọtara na gafere. Ụda na-akpali? Ugbu a na-eji a ndu ịmụta otú iji Naa Onye kere na iMovie.
Voice-ihe karịrị ike ịgbakwunye otu onye aka na aka na-alụso ọrịa. Ọ bụrụ na ị na-eche dị gị nkiri pụrụ irite uru site a na-eduzi aka olu, i nwere ike tinye ha mfe na iMovie. Gụọ a ndu ịmụta otú idekọ ma tinye olu-ihe karịrị gị iMovie videos.
Chọrọ ka ịgbakwunye anwansi Free Frames mmetụta ike a Hollywood-dị ka ihe nkiri? Ị pụrụ ime ya maka free iji iMovie, na ọ bụ a cinch.
1. Ke Project nchọgharị, megharia playhead (uhie vetikal akara) n'elu etiti ị chọrọ ifriizi, na mgbe ahụ jituo Control isi dị ka ị pịa.
2. Ke menu na-egosi, họrọ Tinye Ifriizi ụba. Mgbe ahụ a ifriizi-eku clip ịtinye na playhead. Ị nwere ike ịdọrọ ya ka a ọhụrụ ọnọdụ na oru ngo na-agbanwe ya oge.
iMovie agụnye Ken Burns mmetụta nke-enye gị ịgbanwe cropping nke a video clip ma ọ bụ foto karịrị oge. Ọ nwekwara ike-eji na-gosi n'ụzọ dị irè zuru ezu na nnukwu foto nke obosara ma ọ bụ ogologo akpọkwa. Ebe a bụ na ndu ka akụziri unu otú ịgbakwunye na-ewepụ Ken Burns utịp ke iMovie.
Top 5 free iMovie ọzọ maka PC
> Resource> iMovie> The 20 iMovie Aghụghọ I Kwesịrị Ịmara